Bata - Kudya Zvino!
Mune runyararo nechiyero: Deredza uremu naRenato Torres!
Bromopride: Ziva kuti chii, ndeyei uye chenjera paunenge uchitora!
Goji Secca: Tsvaga zvese nezve ichi kuwedzera uye odha chako izvozvi!
Misi yeMagnesia: Tsvaga zvese zvainoshandisa!
[contact-form-7 id = "43" title = "Bata"]
9 pfungwa pa "udza mashoko"
Kurume 3, 2016 pa13: 22 pm - pepeta
Mhoroi masikati akanaka.
Ndinoda kuziva, kana zvichikwanisika kutenga iyi GENIUS X woitora ipapo ipapo?
Nekuti kwandinogara hakuzovi neanogamuchira, sezvo ini nemukadzi wangu tisipo zuva rese.
Kurume 18, 2016 pa09: 23 pm - pepeta
KUDZIDZISWA KUNO KUNOGONA KUSHANDISWA NEVAKWEGURA ??
Maria wechando dombo
Kubvumbi 9, 2016 pa16: 01 pm - pepeta
NDINODA KUZIVA KANA HAPANA MUDZIMAI, NEKUTI ROPA RINOFANIRA KUVA NGUVA DZAKAWANDA NDINOKANGANWIRA UYE NDINGAZIVA KUTI YAKADZIDZA SEI uye SIZE KANA VASINA KUGADZIRA MVURA NDINOFANIRA KUTENGA MHURI. HANDIDI PILLS.
Kubvumbi 12, 2016 pa09: 11 pm - pepeta
Mangwanani akanaka ndinofanira kuziva kana ndichigona kutora Genius X. Mwedzi mitanhatu yapfuura ndakavhiyiwa kubvisa anortic aneurysm yakakwira yakanamatira mumoyo uye ma prostheses akaiswa. Ndichava nemhando ipi nenjodzi yekutora mushonga uyu? Ndakarasikirwa nendangariro dzangu zhinji, ndakapinda mukuora mwoyo uye zvakaoma kubuda mairi nemishonga yeallopathic. Ini handikwanisi kuisa njodzi yekukwira kweropa, cholesterol yakakwira uye tachycardia.
Ndine makore makumi matanhatu.
Ini ndakamirira mhinduro uye ndinokutendai pamberi.
Kubvumbi 29, 2016 pa18: 01 pm - pepeta
Manheru akanaka, ndakatenga genius x vhitamini yekuwedzera, ndine kusahadzika,
ndinogona kutora genius x madonhwe nemacapsule panguva imwe chete? mangani madonhwe uye mangani macapsule andinogona kutora pazuva?
Ini ndinogona kutora genius x kwenguva yakareba sei?
Iwe une chero mhedzisiro here?
Unogona here kunwa doro nenjere x?
Ndinokutendai nekutarisa kwenyu;
Chivabvu 1, 2016 pa11: 51 pm - pepeta
NDINODA KUTENGA CHETE 1 GENIUS X YEMAHARA KUGARA?
SEZVO CHETE CHIITIKO.
Chivabvu 20, 2016 pa13: 38 pm - pepeta
Ndiri kufarira kwazvo kutenga ichi chigadzirwa, asi nekuti ini handioni kuti paine mari yekubhanga yekuibhadharira, handina kukwanisa kuitenga, nekuti ini handishande nekadhi kana imwe nzira kana zvisiri ne chitupa chebhangi.
Saka ndinokumbira iyi boleto imwe nzira kuti ndikwanise kupedzisa kutenga kwangu
Kumirira kudzoka ...
Chivabvu 20, 2016 pa13: 46 pm - pepeta
Ndiri kufarira kwazvo kutenga iyo Simudza-x, asi sezvo ini ndisingashande neimwe nzira yekubhadhara kunze kwekubhadharwa kwebhangi, ndinokumbira kuti undipe iyi imwe nzira kuti ndikwanise kupedzisa muripo wangu wekutenga uku kwakamirira.
maria de lourdes vatsvene
Nyamavhuvhu 22, 2016 pa01: 33 pm - pepeta
mhoro ndinoda kuziva kuti nei slimpacth isingagone kutorwa nevanhu vane matambudziko ehutachiona
Kutambanudza: Iine mabhenefiti mazhinji here? Unofanira kuzviita rini? Bvunza mibvunzo yako!
Natural sandwich: anoshanda, anokurumidza uye anodhura mapikicha!
Kudya Kudya: Tsvaga Izvo Chaizvo Uye Kana Icho Chaicho Chinoshanda!